Ethiopia Oo Eriday Tababarihii Xulka Qaranka Kubadda Cagta
HomeAfricaEthiopia Oo Eriday Tababarihii Xulka Qaranka Kubadda Cagta
19/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka kubadda cagta ee wadanka Ethiopia ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano (EFF) ayaa baabi’iyey qandaraaskii ay kula jireen tababaraha xulka qaranka dalkooda oo lagu magacaabo Mariano Barreto.
Barreto oo u dhay wadanka Portugal, horena u ahaan jiray tababaraha xulka qaranka ee Ghana ayey Ethiopia u magacowday xulka dalkaas ee lagu naanayso Walia Antelopes sannadkii hore, markaas oo ay wada saxeexdeen heshiis laba sannadood ah oo uu xulka Ethiopia ku tababarayey.
Ethiopia ayaa niyad jab ka muujisay tababarahan kadib markii uu xulka dalkaasi ciyaaro aan loo bogin la tegay Koobkii Qaramada Afrika ee sannadkan markaas oo ay Ethiopia kaalinta ugu hoosaysa ka gashay groupkii ay ku jirtay.
War-saxaafadeed uu xidhiidhka EFF soo saaray oo lagu daabacay bogga BBC Sport, ayaa waxa lagu shaaciyey in tababare Barreto heshiiskii uu kula jiray Ethiopia ay ka baxday.
Warbaahinta gudaha ee Ethiopia ayaa dhowaanahanba sheegaysay kala-qaybsanaan u dhexaysa xidhiidhka Ethiopia iyo tababare Barretto, taas oo soo baxday markii la shaaciyey isku-aadka is-reebreebka qaramada Qaaradda Afrika ee sannadka 2017 la qaban doono, kaas oo ay Ethiopia isku group noqdeen Algeria, Lesotho iyo Seychelles. Bisha June ayaa waxay Ethiopia la ciyaari doontaa Lesotho, iyadoo la filayo in si degdeg ah loo shaaciyo tababare beddela Barreto.
Barreto ayey Ethiopia u magacowday tababaraha xulka qaranka dalkaas 22 April, 2014, kadib markii ay shaqada ka eriday tababarihii ka horreeyey oo lagu magacaabi jiray Bishaw 05 February, 2014.
Antonio Conte Oo U Quus-gooyey Inter Milan
Wenger Oo Xaqiijiyey In Arsenal Ku Hungowday Jamie Vardy
19/06/2016 Abdiwahab Ahmed
Arsene Wenger Oo Shaaciyey In Arsenal Dhamaystirtay Heshiiska Emerick Aubameyang